ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ (အပိုင်း ၁)
အင်ဒိုနီးရှားကို လုပ်ကြံလာသော ရှာရီရာပြုခြင်း (အစ္စလမ် ဓမ္မသတ် ရှာရီရာကျမ်းမှ ကျင့်ထုံးတို့ကို
လူမှု ဥပဒေအဖြစ် ကျင့်သုံးခြင်း) ကို အင်ဒိုနီးရှား မူဆလင် ဘာသာရေးပညာရှင် ဆီရဖိ
အန်ဝါက သတိပေး ဖော်ပြရာတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘာသာရေးကျင့်ထုံးကို ပြန့်ပွားဖို့ရာ
မျှော်မှန်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရိုးရိုးဟု ယူဆ၍ မရ၊ ၎င်း လုပ်ရပ်သည် ခက်ထန်ရန်လိုသော
လူမှုရေး၊ နုိုင်ငံရေး ရှုထောင့်တခုကို အစဉ်အလာတွင် သည်းညည်ခံမှုကို ကျင့်သုံး သလို
ယဉ်ကျေးမှုတို့ ကြွယ်ဝစုံလင်သည့် ဤနိုင်ငံတွင် အကောင်အထည် ပေါ်လာစေရန် Read more »
Copyright Naytthit Media . Simple template. Template images by rajareddychadive. Powered by Blogger.